बलिउड चर्चित नायिका मल्लिका शेरावत यि प्रेमीसँग सम्बन्धमा रहेपछि सडकमा नै आइन्! – rastriyakhabar.com
बलिउड चर्चित नायिका मल्लिका शेरावत यि प्रेमीसँग सम्बन्धमा रहेपछि सडकमा नै आइन्!
एजेन्सी। कुनै बेला करोडौं कमाउने हिरोइन मल्लिका शेरावतको भाग्यले पनि पछिल्लो समय उनलाई छल गरिरहेको छ । कुनै बेला फ्यानले घेरिने मल्लिका आज सडकमा उभिँदा पनि उनलाई हेर्ने कोही नभएको भारतीय मिडियाहरुले खबर छापेका छन् ।
सुरुमा त मिडिठयाकर्मीले समेत उनको यो फोटो हेरेर विश्वास गर्नै कठिन भयो र कुनै बेला करोडौं कमाउने हिरोइनको हालत यस्तो भयो भन्ने प्रश्न लामो समय न्यूज रुपमा चलिरह्यो ।
यसअघि मल्लिका र उनका ब्वाइफ्रेण्ड सिरिलले पेरिसमा रहेको आफ्नो फ्ल्याटको लागि ८० हजार युरो अर्थात करिब १ करोड नेपाली रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने दिन आउँदा भाडा तिर्न नसकेपछि फ्रान्सको एक अदालतले उनीहरुलाई घर खाली गर्ने आदेश दिए लगत्तै उनको गिर्दो क्रम जारी रह्यो र अहिले उनी सडकमा नै आइपुगीन् ।
भारतीय मिडियाका अनुसार मल्लिका र सिरिल यतिबेला आर्थिक अभावसँग जुधिरहेका छन् । समयको कुरा हो कि कुनै बेला फ्यानले घेरिने मल्लिका आज सडकमा उभिएकी थिइन् र कसैले उनलाई चिन्न सकेनन् ।
सोमवार, असार ४, २०७५ मा प्रकाशित